Nepal Auto | माछापुच्छ्रे बैंकको ‘माया’ सेवा
माछापुच्छ्रे बैंकको ‘माया’ सेवा 26 Bhadra, 2075
काठमाडौं - माछापुच्छ्रे बैंकले आटिफिसियल इन्टेलिजेन्स ‘माया’ सेवाको शुरुवात गरेको छ । हाल ‘माया’ सेवा बैंकको वेबसाइड तथा फेसबुक मेसेन्जरमा उपलब्ध रहेको छ ।
‘माया’ सेवामार्फत माछापुच्छ्रे बैंकको सेवा सुविधालगायत बैंकिङसम्बन्धी जिज्ञासाको जवाफ पाउन सकिने छ । यो सेवामार्फत ग्राहकहरुले फेसबुक मेसेन्जरमा सम्पर्क गरी सातै दिन चौबिसै घण्टा आफ्नो खाताको ब्यालेन्स, खाताको विवरण, नजिकका शाखा, एटीएम, बैंकले प्रदान गरिरहेको बचत खाता, कर्जा, ब्याजदर, वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी जानकारी थाहा पाउन सक्नेछन् । ‘माया’ले ग्राहकको जिज्ञासालाई तुरुन्त विभिन्न स्रोतमार्फत सूचनालाई संकलन गरी मेटाउने छ ।
नेपालमै पहिलोपटक बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो सेवा प्रयोगमा ल्याएको छ । यो सेवा आटिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित भएकाले ग्राहकसँगको अन्तरक्रियाबाट ‘माया’ले स्वयं पनि आफ्नो बौद्धिकता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने बैंकको विश्वास छ । ‘माया’सँग अन्तरक्रिया गर्न फेसबुक मेसेन्जरमा माछापुच्छ्रे बैंक सर्च अथवा मेसेन्जर कोड वा क्युआर कोड स्क्यान गनुपर्नेछ।
अब ५० रुपैयाँमा २४ घण्टा अनलिमिटेड डाटा
काठमाडौं – अब नेपाल टेलिकमका जीएसएम प्रयोगकर्ताले ५० रुपैयाँमा २४ घण्टा सम्म जति...
के हो डिस्क ब्रेक ? कसरी काम गर्छ ?
बाइकमा कस्तो ब्रेक छ ? यो अहिले धेरैका लागि चासोको विषय बन्छ । ए, यो बाइकमा त डि...
क्याट्स आई भनेको के हो ?